လောကထဲက ဘဝတစ်ခု – The Only Way To Go!
Posted on March 21, 2012 December 13, 2019 by barnay
ဒီလောကကြီးထဲမှာ .. ဘဝပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှိပြီး အသီးသီး သူ့အကြောင်းနဲ့ သူ ကျင်လည်နေကြရင်း သူတို့လုပ်ရပ်အတိုင်း သူတို့ အကျိုးခံစားကာ သံသရာ စက်ဝန်းပေါ်မှာ .. လည်ပတ်နေကြရပါတယ် … ။ သံသရာစက်ဝန်းပေါ်မှာ အဆင့်မြင့်မြင့်နေကြရတာရှိသလို .. အဆင့်နိမ့်နိမ့် နေကြရတာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် .. ။ မြင်နိုင်မယ်ဆိုရင် .. ကိုယ့်ပတ်ဝနး်ကျင် ဘေးဝဲယာကို တချက် ငဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ် .. ။ ဖိနပ်အကောင်းစားတွေ လဲလှယ်စီးနိုင်သူတွေနဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံရဖို့ ရုန်းကန်ရေသူတွေ ရှိသလို .. ဖိနပ်စီးဖို့အတွက် စိ်တ်ကူးထဲမှာတောင် မထည့်ထားသူတွေ ရှိကြပါတယ် .. ။ သို့သော်လည်း ကွာခြားမှု အကြောင်းကတော့ .. သရက်သီးစားရတာဟာ သရက်ပင်စိုက်ခဲ့လို့ပါပဲ .. ။ ကျနော်တို့တတွေအတွက် ခုလက်ရှိ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘဝမှာ သရက်ပင်တွေ ထပ်စိုက်ဖို့လိုပါတယ် .. ။( မိမိမှ ကောင်းသော လုပ်ရပ်တွေကိုသာ စိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပါ ) ။
လူတိုင်းမှာ .. သူတို့ဘဝကို သူတို့ ရည်ရွယ်ချက် ၊ ရည်မှန်းချက် တွေနဲ့ မောင်းတင်ရင်း ဘဝရဲ့ ပန်းတိုင် ( သတ်မှတ်ရာ တစ်ခုခု) ကို လျှောက်လမ်းနေကြတာပါ ..။ အဲ့ဒီလို လျှောက်လှမ်းကြရင်း အကြောင်းညီညွတ်လို့ ရောက်တဲ့သူရှိသလို အကြောင်းလိုလို့ လွဲတာတွေလည်း ရှိကြပါတယ် . ။ သို့သော် အားလုံးကတော့ ရလဒ်တစ်ခုအတွက်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လှုပ်ရှားနေကြသူတွေချည်းပါပဲ ။ ကျနော်တို့ သတ္တဝါတွေဟာ မွေးသည်မှ သေသည်အထိ ရှိတဲ့ ဘဝအပိုင်းအခြားအတွင်း .. လိုချင်မှု မက်လုံးတွေကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ရုန်းကန်နေကြတာများပါတယ် ။ လိုချင်မှုတွေမှာ ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးပါတာရှိသလို အရေးမပါတာများလည်း ရှိပါတယ် .. ။ သို့သော် ဘဝနေဝင်ချိန် ရောက်ခါမှ .. အရေးမပါတာတွေ တော်တော်များခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ အသိက နဲ့ အဆုံးသတ်ရတဲ့သူတွေ များနေကြောင်းကိုတော့ သတိပြုမိပါတယ် .. ။
ခုခေတ် ကျနော်တွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေအများစုဟာ .. ခံစားမှုကို ရှေ့ကထားပြီး သွားနေကြတဲ့သူတွေများပါတယ် . ကိုယ့်ဘဝကို ပညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီး သွားသူနည်းပါတယ် .. ( ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကို ခုထိ အရောရောအထွေးထွေးပါပဲ ) ။ ဒါကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာပါဘူး .. ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ လူဟူသော ဘဝတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့ပါ ။ လူသားတွေဆိုတော့ လူ့နှလုံးသားနဲ့ ပတ်သက်လာရင်၊ တွေ့ကြုံလာရင် ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခံစားမိမှာပါပဲ ..။ ပြီး ခံစားချက်အတိုင်း ပြုမူတုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ခင်တွယ်စရာရှိတာတွေကို ခင်တွယ်ရင်း နှောင်မိခံကြရတာတွေကြောင့် ..ဘဝဟာ သစ်ပင်တစ်ပင်လိုပဲ နွယ်ခိုခံရလို့ ကြီးထွားနိုင်သင့်သလောက် မကြီးထွားပဲ သက်တမ်းကုန် အလဟဿ ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး မပီမပြင်နဲ့ အဆုံးသတ်ရတာတွေ များပါတယ် ။ တကယ်တော့ ခံစားမှုဟာ တဘဝလုံးစာအတွက် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုချင်တာပါ ။
ယျေဘုယျ ဘဝတစ်ခုမှာ မွေးဖွားလာပြီး ပညာသင် အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်ပြု စီးပွားတည် ကောင်းမွန်တဲ့ မိသားစု တစ်ခု တည်ထောင် ၊ နောက် သက်ကြီးပိုင်းရောက် တရားရှာ .. ပြီး မရဏလမ်းကိုဝင် .. ဆိုပြီး တွက်ဆကြည့်ပါတယ် ။ ဒါက ကျနော် မြင်ကြည့်တာပါ .. လူတိုင်းမှာ သူတို့အမြင်တွေနဲ့ သူတို့မို့ ရှိကြပါလိမ့်မယ် ။ သို့သော် . ကိုယ့်ဘဝလမ်းကို ချိန်ထိုးပြီး လုပ်သင့်တာ မလုပ်သင့်တာတွေကို ကြိုတင်သိထားစေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့် ပြောပြနေရခြင်းပါ ။ အဲ့ဒီလို ဘဝကို အစဉ်အတိုင်း သွားနေပါပြီတဲ့ .. ကျနော်တင်ပြသလို အစီအစဉ်လေးနဲ့ ဖြောင့်တန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ .. ။ အဲ့လို အစီအစဉ်အတိုင်းမလာပဲ .. မရဏလမ်းက ကြားကနေဖောက်လာမယ်ဆိုရင် .. ကျနော်တို့ ယခုလို ရခဲတဲ့ လူ့ဘဝကို ကျေနပ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အတွေးပါ ။
လူတိုင်းနီးပါး အမြင်မှာပေါ့ ဒါကတော့ ဘယ်ကျေနပ်နိုင်မလဲကွ .. မဖြစ်သင့်တာ ဘာညာ ၊ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး စသဖြင့် ဆင်ခြေများ တိုးဝင်လာကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် သာမန်အမြင်ကတော့ အဲ့ဒီလိုပါပဲ လက်မခံနိုင်စရာပေါ့ ဘာလို့လက်မခံနိုင်တာလဲဆိုရင် ကောင်းတာချည်းပဲ ခံစားချင်နေတဲ့ လူ့စိတ်ကြောင့်ပါ ။ လူတစ်ယောက်မှာ ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ .. အတိတ်ကံအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သေသွားနိုင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို အဖြစ်ဟာ ကိုယ်သွားနေတဲ့ ပန်းတိုင်မရောက်ခင် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရော ကျနော်တို့ ရခဲ တယ်ဆိုတဲ့ ဘဝကို အဖြစ်ခံနိုင်ပါ့မလား .. ။ ဘယ်သူမှ အဖြစ်မခံနိုင်ကြဘူးထင်ပါတယ် ( ကျနော်လည်း မဖြစ်ချင်တာပါ ) ။ ဒါဆို ဘယ်လိုတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ကာကွယ်ထားမလား … ။ ဘာပဲလာလာ အဆင်သင့် ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် ဖြစ်ထားဖို့လိုပါတယ် ။
တောထွက် တရား ကျင့်ဖို့ မဆိုလိုပါ ။ ခုအလုပ်ကထွက် တရားစခန်းဝင်ဖို့မဆိုလိုပါ ။ စားဝတ်နေရေးရယ် မိသားစုရယ် ဖြေရှင်းစရာ အပူအပင်တွေရယ်နဲ့ ရယူချင်တာတွေရှိသေးတာကြောင့် လူတိုင်း လမ်းပြောင်းနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲ ဆိုတာမှာ … ကျနော်တို့ နေ့စဉ် အလုပ်တွေလုပ်နေစဉ်အတွင်း မှာဖြစ်ဖြစ် အားလပ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စိတ်ကို သတိနဲ့ နေကြည့်ဖို့ပါပဲ ။ ဘယ်လိုသတိနဲ့လဲဆိုရင်
ကိုယ်တွေးနေတာကို ……..…..တွေးမှန်းသိတဲ့ အသိ
ကိုယ်လုပ်ကိုင်နေတာကို ………လုပ်ကိုင်နေမှန်းသိတဲ့ အသိ
ကိုယ်ဖတ်နေတာကို ……………..ဖတ်နေမှန်းသိတဲ့ အသိ
ကိုယ် သွားနေတာကို …………..သွားနေမှန်း သိပေးတဲ့ အသိ ..
အဲ့ဒါလေးတွေကို .. သိရှိပေးရုံပါပဲ ။ အလုပ်အကိုင်လည်းမပျက်သလို . ထူးပြီးလည်း မပင်ပန်းပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့လို မြင်လိုက်တဲ့ အသိအမြင်က ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဘယ်လောက်ထိ တာသွားသလဲဆိုတာ တိုင်းတာဖို့အတွက် … စိတ်ထဲ ထည့်ပြီး တကယ်လုပ်ကြည့်မှ ပိုသိလာပါလိမ့်မယ် ။
လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ သတိရှိလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ …. စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ နေရခြင်း ၊ အတွေးစင်ကြယ်ခြင်း ၊ အကောင်းအဆိုး အမြန်ခွဲခြားတတ်ခြင်း ၊ လုပ်သင့်တာကို လုပ်မိခြင်း ၊ အကုသိုလ်ကို အကုသိုလ်မှန်းသိပြီး ရှောင်ရှားနိုင်ခြင်း ၊ကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်မှန်းသိပြီး တန်ဖိုးထားပြုမူတတ်ခြင်း ၊ ငြိမ်းချမ်းမှု ကိုဖြစ်စေခြင်း ၊ ဘဝတစ်ခုရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို သိရှိလိုက်သည်ဟု ခံယူမိခြင်း ၊ တပါးသူအတွက် ကောင်းကျိုးကိုပဲ ဖြစ်စေလိုခြင်း ၊ မုဒိတာ မေတ္တာ ဥပေက္ခါတွေ ထားတတ်လာခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးများ ရရှိစေပြီး သေခြင်းတရားနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ပူပင်သောကမရှိပဲ ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း .. ၊ သေဖို့အတွက် မကြောက်တော့ခြင်း စတဲ့ အရာများ ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မယ် .. ။
အဲ့ဒီလို လုပ်ရပ်တိုင်း သတိနဲ့ နေတဲ့ အလုပ်က လွယ်ပေမဲ့ .. မလုပ်ဖြစ်တတ်ဘူးဆိုတာလည်း သတိထားရပါမယ် ။ ဘာလို့လဲဆို လွယ်နေရင် လူတိုင်း လုပ်ဖြစ်မှာပေါ့ .. ခုက လူတိုင်းမလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး ။ ဘာလို့မလုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင် လူ့စိတ်က ရောက်တတ်ရာရာ သွားနေလို့ပါပဲ .. ။ ဒီတော့ သတိနဲ့ နေကြည့်ပါ .. နေပါ .. လွတ်သွားရင် ပြန်နေလိုက်ပါ .. နောက် အကျင့်ရလာတဲ့အခါ လုပ်ရတာ လွယ်သွားပြီး လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ် .. ။ သတိမြဲသွားတဲ့သူဟာ နေနေစဉ်အတွင်း ကိုယ့်ဘဝကို ကျေနပ်လာတဲ့ အဖြစ်ကို ရရှိလာပါလိမ့်မယ် .. ။ လူတိုင်းလိုချင်ကြပါတယ် ဒါကြောင့် လိုချင်ရင် လုပ်ကြည့်ပါ ။
ဒီလောကကြီးထဲက ဒီဘဝမှာ… ဘာတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ .. အရာအားလုံးဟာ ပြီးတော့လည်း ပြီးသွားမှာပါပဲ .. ။ ယခုအချိန်မှာတော့ မပြီးသေးလို့သာ မပြီးသေးတာမှတ်လိုက်ပါ ..။ နာရီတစ်လုံးပေါ်က ပြေးလွှားနေတဲ့ စက္ကန့်တွေ ကို သေချာကြည့်တတ်စေချင်ပါတယ် .. ။ မနက်ဖန်တွေက အများကြီးပါ .. သို့သော် ဘဝကတော့ တစ်ခုတည်းရယ်မို့ တန်ဖိုးထား လေးစားပြီးနေပါ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မြင် ၊ ပြန်ကြည့် ၊ ပြန်စစ်ဆေး တတ်ဖိို့လိုပါတယ် .. ဒါမှ သင်ဟာ လောကထဲက တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ ဖြစ်မှာ ..။
Posted in စိတ်, ဘဝTagged ဘဝဒဿန
6 thoughts on “လောကထဲက ဘဝတစ်ခု”
လူေတြက အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တာကိုသိလဲ ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔အင္မတန္ခဲယဥ္းတယ္။ သတိဆိုတဲ့အရာေလးက ဘယ္ေလာက္မွ မပင္ပန္းမွန္းသိလဲ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ခက္ေနတယ္။
ကို္ယ္တိုင္လဲ ဒီလုိပါပဲ သတိထားရင္းနဲ႔ လြတ္တာေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ အကုသိုလ္ကင္းေအာင္ေတာ့ ေနမိတယ္။ ဘ၀ကို တန္ဖိုးရွိဖို႕ဆိုရင္ စိတ္ကျငိမ္းခ်မ္းဖို႔ အရင္ဆံုးလိုအပ္တယ္ထင္မိတယ္။
ေကာင္းတယ္… ဘာေန။ အဲလိုေတြ ေရးေပးတဲ့အတြက္ ေမ့ေနတာေလးေတြကို ျပန္သတိေပးေနသလိုပဲ။ ေက်းဇူးတင္မိတယ္။
ခုလို သတိရသြားတဲ႔အတြက္ ေရးရက်ိဳးနပ္မိပါတယ္ ..။ ေက်းဇူးပါ
Nothing is permanent !
Everything is decay one day!
But we must own our present life!
So we have to do our present time in good deed!
These words are Our Lord Buddha’s Saying!
“this too,will pass”
Thank you , ma ChoZin.
One thing , we have to obey is doing what we know in this present.
“Doing” is influence everywhere to be success.!
Take Care what you have to do.
ေတာ္ေသးဗ်ာ သတိနဲ႕ေနခိုင္းလို႕ ။ ပညာနဲ႕ေနဆိုရင္ ဟိုပုံျပင္လို႕မ်ားျဖစ္သြားေကာင္းရဲ႕ ။
ဟိူတူန္းကလင္မယားႏွစ္ေယာက္ဆိုလား လင္ျဖစ္သူက တနယ္တေက်းကိုအလုပ္သြားလုပ္
ခါနီးေလးမွာ ဇနီးျဖစ္သူကိုမွာသတဲ႕ ၊ စိတ္ခ်ပါရေစ အတီးအတလုပ္မေနနဲ႕ ပညာနဲ႕ေနေနာ္-တဲ႕ ။
လင္ျဖစ္သူခရီးသြားေတာ႕ ဇနီးျဖစ္သူက အတီးအတဆိုေတာ႕ လင္မွာသြားတဲ႕အတိုင္းလိုက္နာ
ရွာသတဲ႕ ။ ရြာထဲကကိုယ္ပညာဆိုတဲ႕လူကိုေခၚၿပီးေနလိုက္တာ လင္ျဖစ္သူျပန္လာေတာ႕
ကေလးတစ္ေယာက္ရေနပါေရာတဲ႕ ။ လင္ျဖစ္သူက နင္ငါစကားနာမေထာင္ဘူး ငါမွာခဲ႕
ရက္နဲ႕ဘာညာဆိုေတာ႕ မယားလုပ္သူျပန္ေျပာလိုက္ပုံက–ရွင္ပဲ ပညာနဲ႕ေနဆိုတဲ႕ ။
အေနာ္တို႕ကလည္းသတိေပးႏိုင္မွေတာ္ကာက်တာဗ်ေနာ္ ။ သတိ-အမိႈက္မပစ္ရ ။
သတိ-ကြမ္းမေထြးရ ၊ သတိ-ရွဴရွဴးမပန္းရ ၊ သတိ-2012 အတြင္း ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုရွိ။
သတိ သတိ သတိ ———-
အဲ႔ဒီ မိန္းမက “အ” တာေရာ ဟုတ္သလားဗ်ာ .. 🙂 .. ။ သတိဆိုတာေတြက ေနရာတိုင္း ရွိေပမဲ႔ ေနရာတိုင္း မျဖစ္ၾကပါဘူးဗ်ာ .. ။ အခြံသတိေတြက မ်ားေနၾကတာပါ .. ။ အနွစ္သတိေတြကေတာ႔ မွန္မၾကည္႔တဲ႔သူမ်ားမွ မရွိပါဗ်ာ .. ။ တကယ္ေတာ႔ လိုအပ္ခ်က္ၾကီးတစ္ခုပါ .. ။ သိေသာ္ျငား မသိသလို ေနရင္း အသက္ေတြက ပဲ႔ပဲ က်လာကာ အဆံုးသတ္ရတာေတြ မ်ားပါတယ္ဗ်ာ .. ။